Somali - Setlementti Tampere ry / PVK
Perheväkivaltaklinikka waxay bixisaa falanqayn, hagitaan iyo kooxaha taageerada dhibanaha iyo dembiilayaasha dagaalka dhibta. Adeegyadu waa qarsoodi, bilaash oo waxay u furanyihiin dhammaan. Waxaad raadin kartaa caawimo keliya ama si wada jir ah xubinta qoyska.
Ku saabsan Perheväkivaltaklinikka
Perheväkivaltaklinikka waxay bixisaa falanqayn, hagitaan iyo kooxaha taageerada dhibanaha iyo dembiilayaasha dagaalka dhibta.
Waxaanu siinaa falan qayn iyo hagitaan qof kasta oo dhibaato ka soo gaadhi dagaalka qoyska. ‘Qoyska’ waxa uu la micno lahaan lahaa xidhiidh kasta kaas oo dadka ku lug leh ay la leeyihiin xidhiidh dareen oo adag midba midka kale Waxaanu sidoo kale lahayn kooxaha taageerada kaa caawin kara inaad la tacaasho khibradaha dagaalka oo xalisa xaaladaha dhibaatada leh iyaddooonay jirin dagaal.
Tusaalooyinka dagaalka ee qoyska, waxa loola jeedaa dagaalka guriga, waxa ka mid ah:
Waxaanu la shaqaynaa shakhsiyaadka, lamaanayaasha iyo qoysaska muddada kullamada la qorsheeyay. Muddada kullanka, waxaanu kugu caawinaa raadsashada qaababka laguugu caawiyo inaad si wanaagsan ula qabsato nolosha maalinlaha ah oo looga hortaggo mustaqbalka.
Adeegyadayada waxaa loogu talo galay dadka kaas oo dhibane ahaa ama dembiilayaasha xad gudubka guriga, ama labbadaba Waxaad nala soo xidhiidhi kartaa keligaa, lamaane ahaan ama qoys.
Shaqaalahayagu waxay ku hadlaan Finnish iyo Ingiriisi; haddii kale waxaanu isticmaalnaa turjubaan, mar kasta oo ay suuragal tahay.